XOG: DF oo amar ku bixisay in la soo xiro Gen: Indho Cadde oo laga la’yahay Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: DF oo amar ku bixisay in la soo xiro Gen: Indho...
XOG: DF oo amar ku bixisay in la soo xiro Gen: Indho Cadde oo laga la’yahay Muqdisho
Ciidanka ayaa ku raad jooga Wasiir ku-xigeenkii hore ee Gaashaandhiga Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indho-cadde oo habeen ka hor shaaciyay in Dowladda aysan ka jirin dalka,islamarkaana dalka uu u baahan yahay in la badbaadiyo.
Sida xog hoose oo aan ka helnay, madaxweyne Farmaajo oo ka carooday hadalkii habeen ka hor uu Generaalka ka jeediyay taaladda Daljirka Daahsoon ayaa amar ku siiyay Hay’adaha amniga in ay soo xiraan si wax looga weydiiyo hadalkaas iyo waxa uu ku keenay.
“ Sida aad ogtihiin dalka Dowlad ma leh, Baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisa waa dhamaaday, Xukuumadda Waqtigeeda waa dhammaaday,markaas dalku Dowlad maleh,” ayuu yiri Generaal Indho-cadde mar uu tegay Dalka Daahsoon oo ay ku sugnaayeen ciidanmo daacad u ah Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif”.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa gef weyn ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray Indho cadde, wuxuun sheegay in Soomaaliya hal habeen Dowlad la’aan noqon laga soo bilaabo 2000 iyo hadda oo 21-sano laga joogo.
Lama oga halka uu cirib iyo jaan dhigay, lama arag Indho cadde wixii ka dambeeyay markii uu dhacay dagaalkii mucaaradka iyo Dowladda.